PE သံမဏိများအတွက် PE အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောသတ္တုများအတွက် PE အကာအကွယ်ပေးသောရုပ်ရှင်
မွေ့ယာအဖုံး Polyethylene ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်
200 Micron Polyethylene ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်
မြင့်မားသော Density Polyethylene ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်
အနိမ့်သိပ်သည်းဆ Polyethylene ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်
PE သံမဏိပြားများအတွက် PE အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်
acrylic အရည်ပျော်အခြေစိုက်စခန်းကော် PE ကာကွယ်ရေးရုပ်ရှင်
acrylic ရေအောက်အခြေစိုက်ကော် PE ကာကွယ်ရေးရုပ်ရှင်
Ultra 3200mm ကျယ်ပြန့်သော PE အကာအကွယ်ပေးသောရုပ်ရှင်
အထူးအရောင် LDPE ကာကွယ်ရေးရုပ်ရှင်
အနက်နှင့်အဖြူ PE ကာကွယ်မှုရုပ်ရှင်
အပြာရောင် PE အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်
Foshan Yesla ကော်ထုတ်ကုန်များ CO ။ , LTD
5 လမ်းမကြီး NO.20, Nanlang စက်မှုဇုန်,ရှင်တန်မြို့, Shunde .ရိယာ, ဖိုရှန်မြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်.
ဖုန်း +86 13450860913
လိပ်စာ5လမ်းမကြီး NO.20, Nanlang စက်မှုဇုန်,ရှင်တန်မြို့, Shunde .ရိယာ, ဖိုရှန်မြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့,ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပါ၊ 24 နာရီ.
Foshan Yesla ကော်ထုတ်ကုန်များ CO ။ , LTD © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး သင်္ဘောပေါ်လစီပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ